रीम बुटिकमा राजेशपायल र केकी (फोटोफिचरसहित) | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
काठमाडौं, २२ साउन । चर्चित गायक अर्थात् नेपाली गायनका ‘मेगास्टार’ राजशेपायल राई शुक्रबार एक बुटिकमा साडी र कुर्ता सुलवार छान्दैथिए । महिलाहरुको विशेष पर्व तिज नजिकिँदै गर्नु र एक ब्याचलर गायकले सारी र कुर्ता छान्दा दर्र्शक एवं श्रोताले एक सोच्लान् ? अर्को कुरा त्यहाँ उनी एक्लै थिएनन्, उनीसँगै थिइन्, हालैमात्र ग्राजुएट पूरा गरेर चर्चामा रहेकी अभिनेत्री केकी अधिकारी पनि । गायक राजेशपायलले केहीबेर साडी र कुर्ता हेरेपछि केकीलाई भने, ‘एउटा साडी किनिदिउँ ? जवाफमा केकीले भनिन्, ‘पर्दैन । भोलीपर्सि किनौला ।’
हो, नेपाली कला क्षेत्रका यी दुई हटकेक रीम फसेननेट बुटिक उद्घाटन गर्न बागबजारमा देखिए । बागबजारको सिटी स्क्वारमा सञ्चालनमा आएको ‘रीम फेसननेट बुटिक’ को शुक्रबार राजेशपायल र केकीले एकसाथ उद्घाटन गरेका छन् । यो बुटिक फेसन डिजाइनर रीमले सञ्चालनमा ल्याएकी हुन् । बुटिक उद्घाटनपछि गायक राजेशपायलले भने, ‘यस बुकिटले फेसन पारखीका चाहनालाई पूरा गर्नेछ ।’ साथै, उनले आफू ब्याचलर (अविवाहित) भएकाले कसलाई साडी किनिदिने भन्नेमै दोधारमा परेको बताए । ‘केकीलाई किनिदिउँ भनेको पदैन भन्छे’ राजेशपायलले ठट्टा गर्दै भने, ‘भोलीपर्सी अरुलाई नै किनिदिनु पर्ला ।’